Real Madrid oo saddex rikoodh cajiib ah sameysay, kadib ku guuleysigoodii koobka Club World Cup – Gool FM
Real Madrid oo saddex rikoodh cajiib ah sameysay, kadib ku guuleysigoodii koobka Club World Cup
Dajiye December 22, 2018
(Abu Dhabi) 22 Dis 2018. Real Madrid ayaa ku guuleysatay koobka Club World Cup kadib markii kooxda carbeed ee Al Ain ay ku xasuuqday 4-1.
Goolasha kooxda Real Madrid ay guusha ku raaxday ayaa waxaa kala dhaliyay xidigaha kala ah Luka Modric, Marcos Llorente, Sergio Ramos iyo gool uu iska dhaliyay xidiga kooxda Al Ain Yahia Nader.
In Real Madrid ay ku guuleysatay koobka Club World Cup ayaa ka dhigan inay sameesay rikooro cajiib ah ee isugu jira ciyaartoy ahaan iyo heer kooxeed, si ay u xaqiijiso inay tahay mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaarada yurub taariikhda kubada cagta.
Real Madrid ayaa noqotay kooxda ugu badan ee ku guuleysatay koobka Club World Cup, kadib markii ay qaaday 4 jeer, sanadihii 2014, 2016, 2017 iyo 2018, waxaa ku soo xigta Barcelona oo iyadana ku soo guuleysatay tartankan saddex jeer ee kala ah2011, 2009 iyo 2015.
dhinaca kale Toni kroos ayaa noqday ciyaaryahanka ugu badan ee ku guuleystay koobka Club World Cup, wuxuuna sidaas sameeyay 5 jeer, hal jeer ee ah kooxda Bayern Munich sanadii 2013, iyo 4 jeer kale ee ah Real Madrid.
Kadib markii ay Real Madrid ku guuleysatay koobka Club World waxay noqotay kooxdii ugu horeysay abid taariikhda ee tartankan ku guuleysatay saddex jeer ee xiriir ah 2016, 2017 iyo 2018, mana jirto koox xitaa horey ugu guuleysatay 2 jeer ee xiriir ah.
Shaxda rasmiga ah ee Juventus vs Roma
Ole Gunnar Solskjaer oo Guul weyn ku hogaamiyay Manchester United Kulankiisa ugu Horreeya..+SAWIRRO